‘युवामा क्षमता देखिनुपर्यो, अनि मात्र नेतृत्वमा दाबी गर्नुपर्छ’
(सम्पादकीय नाेट :१४औँ महाधिवेशनको काउन्टडाउन सुरु हुँदै गर्दा यतिबेला नेपाली कांग्रेसभित्र राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ । पार्टी सभापतिदेखि केन्द्रीय समिति, प्रदेश, जिल्ला हुँदै वडास्तरसम्म यतिबेला कांग्रेसलाई महाधिवेशनले छोपेको छ ।
फरकधारको यो शृंखलामा हामीले कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुसँग महाधिवेशनपछिको कांग्रेस कस्तो हुनुपर्छ ? र, युवा नेतृत्वको सम्भावना के छ ? भनी सोध्ने छौँ । यसै क्रममा पर्सा जिल्लाका नेपाली कांग्रेसका सभापति अजयकुमार द्विवेदीलाई हामीले यो शृंखलामा प्रस्तुत गरेका छौँ । )
कांग्रेसको नेतृत्व सबैलाई मिलाएर लैजाने खालको नै खोज्नुपर्ने बेला भइसकेको छ । राष्ट्रिय परिस्थिति झन्झन् नयाँ बन्दै गइरहेको छ । चुनौतीहरु पनि नयाँ-नयाँ छन् । समाजका आकांक्षा पनि नयाँ छन् ।
युवा जनसंख्या उल्लेख्य रुपमा बढी छ । यो वर्गलाई समेट्नु आवश्यक त छ नै साथमा नेतृत्व भने सम्पूर्ण देशलाई मिलाएर लैजान सक्ने, पार्टीलाई मिलाएर लैजान सक्ने हुनुपर्छ । राजनीतिक मुद्दाहरु पनि यतिखेर निकै थपिएका छन् । ती मुद्दालाई पनि समयमै बुझ्न सक्ने र त्यसका लागि समग्र पार्टी पंक्तिलाई तयार गरेर कौशलतापूर्वक लिड गर्न सक्ने खालको नेतृत्व आवश्यक छ ।
कांग्रेसलाई युवाले नेतृत्व गर्नुपर्ने भन्दै आएको लामो समय बितिसक्यो । युवाहरु अक्षम छैनन्, तर नेतृत्वमा युवा हुन् कि उमेर पाकेका, त्यसले केही फरक पार्ने होइन । उमेरकै आधारमा सबै कुराको मूल्यांकन गरिनु न्यायसंगत हुँदैन । युवाले नै राम्रो गर्छन् भन्ने कुरामा मचाहिँ विश्वास गर्दिनँ । हामी बिपी कोइरालाका ‘फलोअर्स’ हौं । उहाँ भन्नुहुन्थ्यो– मान्छे उमेरले हैन कि स्पिरिटले युवा हुन्छ । उहाँले तरुणको परिभाषा दिनुहुन्थ्यो, तरुण को हो ? जो तरुणलाई चिन्छ, गर्न सक्ने आँट राख्छ र त्यसका लागि क्रियाशील छ, अघि बढ्ने त्यही नै हो । त्यो नै तरुण हो ।
त्यसकारण सचेत हुनुपर्यो, समाजका प्रति, राजनीतिका प्रति, भविष्यका प्रति, आउने हाँकहरुका प्रति पनि सचेत हुनुपर्यो । पार्टी बुझ्नेले गहिरो ढंगमा बुझ्नुपर्यो । पार्टीमात्र भनेर पनि भएन, त्यसमा गहिराइ पनि हुनुपर्यो । विगतलाई, वर्तमानलाई र भविष्यलाई आकलन गर्ने खालको युवा हुनुपर्यो । कहिलेकाहीँ उमेरको ऊर्जाले पनि युवामा आँट भर्ने काम गर्न सक्छ । त्यो युवा जतिसुकै परिपक्व भए पनि स्पिरिट छैन भने काम गर्न सक्दैन भन्ने मेरो बुझाइ हो ।
उमेरले युवा छु त्यसकारण मैले नेतृत्व पाउनुपर्छ भन्ने कुरो कुनै पनि हालतमा मिल्दैन । पहिलो कुरो युवामा क्षमता देखिनुपर्यो । त्यसपछि उसले दाबी गर्नै पर्दैन उसलाई पार्टीले र कार्यकर्ताले आफैं खोज्छन् ।
नेपाली कांग्रेसमा परिवारवाद चल्दै आएको भन्दै विभिन्न टिप्पणीहरु बेलाबेलामा हुने गरेका छन् । तर, म भन्छु– कांग्रेसमा परिवारवाद छँदै छैन । प्रकाशमान सिंह हुनुहुन्छ, खाली उहाँ गणेशमान सिंहको छोराको रुपमा आउनुभएको हो ? होइन नि ! उहाँको आफ्नै पृष्ठभूमि छ । लामो समय संघर्ष गर्नुभएको छ । नेपाल विद्यार्थी संघको राजनीतिबाट उहाँ यो ठाउँसम्म आइपुग्नुभएको हो । विमलेन्द्र निधिको पहिचान महेन्द्रनारायण निधिको छोरामात्र होइन, यसले मात्रै उहाँको परिचय बनेको हो ? होइन । उहाँ १४ वर्षको उमेरमै जेल परेको मान्छे हुनुहुन्छ । विद्यार्थी राजनीतिबाट उठेर आजको दिनमा राष्ट्रिय राजनीतिमा आउनुभएको हो ।
डा. शंशाक कोइराला पार्टीको महामन्त्री हुनुहुन्छ । सारा कार्यकर्ताले देशभरका महाधिवेशन प्रतिनिधिले रोजेर बन्नुभएको हो उहाँ । कसैले टीका लगाइदिएर उहाँ महामन्त्री बन्नुभएको हो ? बिपी कोइरालाको छोरा भनेर टीका लगाइदिएर उहाँ आउनुभएको होइन । हो, उहाँहरुको पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिक छ । तर, त्यो भनेको सम्पदा हो, सम्पत्ति पनि हो । प्रकाशमानका लागि गणेशमान, विमलेन्द्रका लागि महेन्द्रनारायण र शंशाकका लागि बिपी उहाँहरुको सम्पदा र अविचलित सम्पत्ति हो भन्छु म । तर, आफ्नो पृष्ठभूमि राजनीतिमा छ वा छैन भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो । आफ्नो मातापिताको नाम भजाएर उहाँहरुले राजनीति गर्नुभएको भए त्यो गलत हो । तर, सारा देशलाई थाहा छ उहाँहरुको आफ्नो पृष्ठभूमि छ । हो, विरासतचाहिँ उहाँहरुलाई प्राप्त छ, त्यो उहाँहरुको आफ्नो सम्पदा हो ।
नयाँनयाँ राजनीतिक घटनाक्रमका बीच नेपाली कांग्रेसले महाधिवेशन गर्नुपर्ने अवस्था यतिबेला छ । महाधिवेशन गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ । मुख्य कुरा अहिले पार्टीले क्रियाशीलको विवाद नै टुंग्याउन सकेको छैन । क्रियाशील विवाद टुंग्याउन पार्टीले अहिले जुन तरिका अपनाएको छ, यो आपत्तिजनक र सरासर गलत छ । न पार्टीको विधान मानेको छ न विधि मानेको छ ! खाली मिलाउने नाममा पार्टीको यो विधि र विधान मिचेर सारा काम भइरहेको छ ।
त्यसकारण मलाई लाग्दैन कि सजिलै यो क्रियाशील विवाद टुंगिन्छ । क्रियाशील विवाद नै नटुंगीकन महाधिवशेनका अन्य प्रक्रिया अघि बढ्दैन, बढ्नै सक्दैन । तैपनि सबैको साझा प्रयास भने भइरहेको छ । सबैजना लाग्ने हो भने महाधिवेशन गर्न सक्छौं भन्ने मलाई लागिरहेको छ ।
साथै, हामी बाढी–पहिरो, कोभिडलगायतको समस्या पनि भोगिरहेका छौं । यसलाई दृष्टिगत गर्दै हामीले नयाँनयाँ प्रविधिको भरपूर प्रयोग गर्नेतिर ध्यान दिनुपर्छ । टेक्नोलोजीको युग हो नि यो त । त्यसकारण प्रविधिको प्रयोगबाट हामीले महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सक्छौं । मुख्यतः हामीसँग दृढ इच्छाशक्ति हुनुपर्यो, महाधिवेशन गर्न समस्या हुँदैन ।
(द्विवेदी नेपाली कांग्रेस, पर्साका सभापति हुन् ।)
प्रकाशित मिति : साउन १०, २०७८ आइतबार १८:१२:२२, अन्तिम अपडेट : साउन ११, २०७८ साेमबार १८:४५:४२